ဘဝမှတ်တိုင်: G-talkနဲ့ ဖုန်းခေါ်မယ်။
12:53 PM နည်းပညာ, ဖုန်းနည်းပညာ No comments
mp4သီချင်း (7) ကဗျာ (2) ကျန်းမာရေး... (3) စင်္ကာပူသတင်း (1) ဓါတ်ပုံ (11) နည်းပညာ (8) ဖုန်းနည်းပညာ (2) ဗီဒီယို (3) မလေးရှားသတင်း (25) လစဉ်ဗေဒင် (3) လမ်းညွှန် (1) သတင်း (10) သတိပေးချက် (2) သီချင်း (3) အင်တာဗျူး (3) အမှတ်တရ (3) ဆောင်းပါး (3) မွေးနေ့ဆုတောင်း (3) ကြေငြာ (1) မြန်မာသတင်း (5)
မြန်မာဘောလုံးချစ်သူများ နိုင်ငံခြားပွဲစင်ရလဒ်များ ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် လီဘာဘူးပရိတ်သတ်အတွက် ချဲလ်ဆီးနှင့်သူချစ်ပရိတ်သတ်များ ကမ္ဘောဇ မြန်မာဘောလုံးသတင်း sepn ဘောလုံးသတင်းစုံ myanmar goal
သန်း...flash song များ...
တယ်လီဖုန်.... အဆင်အမြဲ.... ရေစီးကြောင်းသံယောဇဉ်..... အသိုင်းအ၀ိုင်း.... အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တော့...... မင်းလေးနားလည်.... ကိုယ့်အနားရှိနေစေချင်..... သူငယ်ချင်းလေး.... ကောင်မလေး....
မလေးရှား အွန်လိုင်း ရေဒီယိုနားဆင်ရန်
နိုင်ငံ ၃၀ ကို gtalk ကနေ အခမဲ့ အကန့်အသတ်မရှိ ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ... အသုံးပြုနည်းကတော့ .... 1. Google Talk ကိုဖွင့်ပါ။ 2. ကိုယ်ဆ...
ရိုဟင်ဂျာကုလားတွေ မုဒိမ်းကျင့် လူသတ်ခံရတဲ့ ရခိုင်မလေး သီတာထွေး အကြမ်းဖက်သမားတွေလက်ချက်ကြောင့် အသက်ပေးလိုက်ရတယ်..ရခိုင်မလေး ဒါကတော့ဒေါက်တ...
သနားစရာကောင်းလွန်းတဲ့ အမျိုးသမီး Jacqueline (ဖြစ်ရပ်မှန်)
တချိန်တုန်းက Jacqueline သည်အဲလိုလှပခဲ့ပါတယ် (1999.09.19)
စင်္ကာပူနိူင်ငံမှ သဘင်ချစ်တဲ့ မြန်မာများအတွက် ဖိုးချစ်တို့ကတဲ့ ဇာတ်အလှသဘင် နှင့်အတူသြရသ ဆိုတေးတို့ ပါဝင်တဲ့ပဒေသာကပွဲကြီး
စင်္ကာပူနိူင်ငံမှ သဘင်ချစ်တဲ့ မြန်မာများအတွက် ဖိုးချစ်တို့ကတဲ့ ဇာတ်အလှ သဘင်နှင့်အတူသြရသ၊ ဆိုတေးတို့ပါဝင်တဲ့ပဒေသာကပွဲကြီး အဟောင်းထဲက အသစ် အကာ...
စစ်တွေမြို့တွင် မွတ်ဆလင် လူငယ် တစ်ဦးကို သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ ဖမ်းဆီး၇မိ
ထွန်းထွန်းနှင့် မောင်ရမ္မာ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် မွတ်ဆလင် လူငယ် တစ်ဦးကို သင်္ကန်း ၀တ်ပြီး ယမန်နေ့က ဖမ်းဆီးရမိသည်ဟု သိရသည်။ ယခုအခါ...
mp3 ..mp4..totalvideocomveter register code
ကိုရီးယား အီးပီလုပ်သားလောင်း မြန်မာနိုင်ငံသား ညီငယ်များ အားလုံးသို့ …… (ကိုရီးယားကို အလုပ်လာလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသူများ ဖတ်ရန်) အီးပီလုပ်သားေ...
၀၆.၀၇.၂၀၁၂..နေ့တွင်ကျရောက်သော ညီမလေး ပွင့်ဖြိုးရွှေစင် ရဲ့ ၂၃ မြောက်မွေးနေ့မှ နောင်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ကျော်တိုင် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ ချမ်းသ...
ဘာသာစကား( ၂၄ )မျိုးကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုပေးနိုင်သော Myanmar
အွန်လိုင်း အဘိဓါန်လေးတစ်ခုပါ.. ဘာသာစကား ၂၄ ခုကနေ မြန်မာဘာသာကို ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်.. ဆိုဒ်တည်ထောင်သူတို့ရဲ့ ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုက “မြန်မာတို့...
http://www.3dflags.com/media/icons/key-20111106/flags/120/3dflags-icon-mys1-120-medium.png မလေးရှားရောက် မြန်မာများအတွက် မလေးရှားသတင်းများ အားလုံးဖတ်ရန်
Mtv burmeseclassic အိမ်မက်လှိုင်းး Pansagar Myanmar Music ကိုရီးယားရှပ်ရှင်များ ရွှေအိမ်မက်မြန်မာ့ရှပ်ရှင် ခရမ်းပြာအိပ်မက် myanmarsongs.net အာရှရုပ်ရှင် နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင် အဖြူရောင်သံဇဉ်
4.Talkster မှ ပေးပို့တဲ့ confirmation ကို instructions တေ
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 9/17/2012 06:04:00 am